Tababare Ole Gunnar Solskjaer Oo Arintan Sameeyay Iyo Taageerayaasha Man United Oo Cadho Wayn Ka Muujin Doona. - Gool24.Net
Tababare Ole Gunnar Solskjaer Oo Arintan Sameeyay Iyo Taageerayaasha Man United Oo Cadho Wayn Ka Muujin Doona.
July 9, 2019 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa qaaday talaabo u muuqata mid ka cadhaysiin doonta taageerayaasha kooxdiisa Red Devils taas oo la xidhiidha Romelu Lukaku.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa Romelu Lukaku ka baryay in uu hal sano kooxdiisa sii joogo waana arin gabi ahaanba ka soo horjeeda rajadii ay jamaahiirta Man United ka qabeen in Lukaku uu kooxda ka baxayo oo badalkiisa la keeni doono.
Wargayska The Sun ayaa shaaciyay in Ole Gunnar Solskjaer uu xidiga reer Belgium ee Romelu Lukaku uu ka baryay in uu Old Trafford sii joogo hal sano taas oo cadho wayn ku abuuri karta jamaahiirta United ee xaalada kooxdooda la soo dhibtoonayay.
Wakiilka Romelu Lukaku ee Federico Pastorello ayaa cadeeyay in kooxda Inter Milan ay xagaagan wax walba u samaynayso sidii ay Lukaku ula soo saxiixan lahayd, waxaana la sheegay in Lukaku uu qabo rajada ah in uu ciyaartoy Inter Milan ah noqon doono marka ay labada kooxood wada ciyaaraan.
Ole Gunnar Solskjaer ayaan ilaa hadda samayn wax saxiixyo oo muhiim ah marka laga reebo difaaca midig ee Wan-Bissaka oo ay 50 milyan gini ka soo bixiyeen, waxayna wali United u muuqataa kuwo aan suuqa ka helin ciyaartoyda ay u baahan yihiin.
Inkasta oo ay wali jiraan xidigo badan oo boosas kala duwan ka ciyaara oo Manchester United lala xidhiidhinayo, haddana habka uu u socdo dhaq dhaqaaqa suuqa ee United ayaan ahayn mid raali galinaya taageerayaasha Red Devils ee doonayay in ay kooxdoodu suuqa si wayn uga adeegato.
Laakiin warka uu hadda The Sun shaaciyay ee ah in Ole Gunnar Solskjaer uu Lukaku ka baryay in uu hal sano kooxda sii joogo ayaa ah arin falcelin xun kala kulmaysa taageerayaasha United.
Man United ayaa markii hore u furnayd in ay iibiso Lukaku laakiin Ole Gunnar Solskjaer ayaa xidiga reer Belgium ka doonaya in uu xili ciyaareedka cusub la sii shaqeeyo.
Inter Milan ayaan wali Lukaku ka soo gudbin dalab ay maamulka Old Trafford ku qanci karaan halka Man United ay iska diiday in ay Mauro Icardi isku badashaan.